Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.3 စမ်းသပ်ချက်နှစ်ယောက်ရှုထောင်: ဓာတ်ခွဲခန်း-Field နဲ့ Analog-ဒီဂျစ်တယ်
Lab ကစမ်းသပ်ထိန်းချုပ်မှု ပူဇော်. , လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်သရုပ်မှန်ကို ပူဇော်. , ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်စကေးမှာထိန်းချုပ်မှုနှင့်သရုပ်မှန်ပေါင်းစပ်။
စမ်းသပ်ချက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာ။ အတိတ်ကာလ၌, သုတေသီများဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များနှင့်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များအကြားတစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်တွင်စမ်းသပ်ချက်စုစည်းဖို့ကအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ပြီ။ သို့သျောယခုသုတေသီများလည်း Analog စစမ်းသပ်ချက်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များအကြားတစ်စက္ကန့်စဉ်ဆက်တလျှောက်စမ်းသပ်ချက်စည်းရုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါက Two-ရှုထောင်ဒီဇိုင်းအာကာသသင်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုနားလည်ကူညီခြင်းနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးအခွင့်အလမ်း (ပုံ 4.1) ၏ဒေသများမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။
ပုံ 4.1: စမ်းသပ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုနေရာသိထား။ အတိတ်ကာလများတွင်စမ်းသပ်ချက်အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်း-Field အတိုင်းအတာတစ်လျှောက်တွင်ကွဲပြား။ အခုတော့သူတို့ကလည်း Analog စ-ဒစ်ဂျစ်တယ်အတိုင်းအတာအပေါ်ခြားနားသည်။ ဒါက Two-ရှုထောင်ဒီဇိုင်းအာကာသငါသည်ဤအခနျးတှငျအဖော်ပြရန်လေးစမ်းသပ်ချက်များကသရုပ်ဖော်ထားသည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်, အကြီးမြတ်ဆုံးအခွင့်အလမ်းများ၏ဧရိယာဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
စမ်းသပ်ချက်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည့်တလျှောက်တွင်တဦးတည်းရှုထောင်အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်း-Field အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးသိပ္ပံအတော်များများစမ်းသပ်ချက်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုသင်တန်းအကြွေးများအတွက် Lab ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ဘယ်မှာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ ကတိကျစွာလူမှုရေးအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. တိကျသောသီအိုရီခွဲထုတ်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့အလွန်အမင်းထိန်းချုပ်ထားသည့်အပြင်အဆင်များကိုဖန်တီးရန်သုတေသီများဖွဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စမ်းသပ်မှု၏ဤအမျိုးအစားစိတ်ပညာသုတေသနလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ အချို့သောပြဿနာများအတွက်, သို့သော်, တစ်ခုခုထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သော setting ကိုထိုသို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောလူဦးထံမှလူ့အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ခိုင်မာတဲ့ကောက်ချက်ဆွဲအကြောင်းကိုနည်းနည်းထူးဆန်းပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်ဆီသို့တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုမှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုပိုပြီးသဘာဝက settings ကိုပိုမိုဘုံတာဝန်များကိုဖျော်ဖြေသင်တန်းသားများကိုပိုမိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များနှင့်ကျပန်းထိန်းချုပ်စမ်းသပ်ချက်၏ခိုင်ခံ့သောဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်။
တချို့လူတွေယှဉ်ပြိုင်နည်းလမ်းများအဖြစ်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များထင်သော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုအတူဖြည့်စွတ်အဖြစ်သူတို့ထဲကစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Correll, Benard, and Paik (2007) ၏သတင်းရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များနှင့်လယ်စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြု "မိခင်ပြစ်ဒဏ်။ " အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့မိခင်များသားမရှိဘဲအမျိုးသမီးတွေထက်လျော့နည်းငွေရှာပင်ရသောအခါ အလားတူကျွမ်းကျင်မှုအလားတူအလုပ်အကိုင်အတွက်အလုပ်လုပ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေနှိုင်းယှဉ်။ အလုပ်ရှင်များမိခင်များဆန့်ကျင် biased နေကြတယ်ဆိုတာပါပဲတဦးတည်းအရာ၏ဤပုံစံအဘို့များစွာသောဖြစ်နိုင်သောရှင်းလင်းချက်ရှိပါတယ်။ (စိတ်ဝင်စားစရာဆန့်ကျင်ဘက်သည်ဘိုးဘေးတို့အဘို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဟန်: သူတို့နှိုင်းယှဉ်တသက်လုံးသားမရဘဲယောက်ျားထက် ပို. ဝင်ငွေလေ့ရှိပါတယ်။ ) မိခင်များဆန့်ကျင်ဖြစ်နိုင်သောဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်ရန်ရန်အလို့ငှာ, ဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကနှစ်ခုစမ်းသပ်ချက်သို့ပွေးလေ၏: အ Lab ထဲမှာတဦးတည်းနှင့်လယ်ပြင်၌တဦးတည်း။
ပထမဦးစွာတစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်သူတို့တစ်တွေကုမ္ပဏီကအသစ်က East Coast စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးပို့ချခဲ့ကွောငျး, ကောလိပ်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများဖြစ်နှင့်သောသင်တန်းသားများကို, ကိုပြောသည်။ ကျောင်းသားများကုမ္ပဏီငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သူတို့ရဲ့အကူအညီလိုချင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်, သူတို့အများအပြားအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နဲ့ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ထောက်လှမ်းရေး, နွေးထွေးမှုနှင့်အလုပ်ကတိကဝတ်အဖြစ်မျက်နှာစာ၏နံပါတ်ပေါ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ သူတို့ကလျှောက်ထားသူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့တစ်တွေစတင်လစာအဖြစ်အကြံပြုမယ်လို့ငှားရမ်းအကြံပေးလိုလျှင်ထို့ပြင်ကျောင်းသားများဟုမေးခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများမသိလိုက်ဘူး, သို့သော်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အထူးတဦးတည်းအရာ မှလွဲ. အလားတူဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်: သူတို့ထဲကအချို့ (မိဘတစ်ဦး-ဆရာအသင်းအဖွဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုစာရင်းဖြင့်ဖြစ်စေ) မိခင်အချက်ပြနှင့်အချို့သောမဟုတ်ပြုလေ၏။ ဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကျောင်းသားများမိခင်များငှားရမ်းအကြံပြုဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်သူတို့တစ်အောက်ပိုင်းစတင်လစာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင်အဆိုပါ ratings နှင့်ငှားရမ်း-related ဆုံးဖြတ်ချက်များနှစ်ဦးစလုံး၏စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှတဆင့်ဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကမိခင်များ '' အားနည်းချက်များကိုအကြီးအကျယ်သူတို့အရည်အချင်းကိုနှင့်ကတိကဝတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အောက်ပိုင်း rated ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကတစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တတ်နိုင်သမျှရှင်းပြပေးခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သည်အချိန်ပြည့်အလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးသူကိုတရာအနည်းငယ်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုလုံးကိုအမေရိကန်အလုပ်သမားစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. ကောက်ချက်ဆွဲအကြောင်းကိုသံသယဖြစ်စေတစ်ဦးတည်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုငှါးပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, ဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်းဖြည့်စွတ်သောလယ်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအတုအဖုံးအက္ခရာများနှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူကြော်ငြာအလုပ်တံခါးရာပေါင်းများစွာမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများပြပစ္စည်းများအလားတူအချို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မိခင်အချက်ပြနှင့်အချို့သောမဟုတ်ပြုလေ၏။ ဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကမိခင်များအညီအမျှအရည်အချင်းပြည့်သားမရှိဘဲအမျိုးသမီးတွေထက်အင်တာဗျူးအဘို့အပြန်ကိုခေါ်ရလျော့နည်းဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ တနည်းအားဖြင့်သဘာဝ setting ကိုအတွက်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချအစစ်အမှန်အလုပ်ရှင်များတာတက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနဲ့တူပြုမူ။ သူတို့အားလုံးမှာတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်အလားတူဆုံးဖြတ်ချက်များစေခဲ့သလား ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့မသိရပါဘူး။ အဆိုပါသုတေသီများကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များရှင်းပြဖို့အလုပ်ရှင်များကိုမေးမတတျနိုငျကွသညျ။
စမ်းသပ်ချက်ဒီစုံတွဲကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုအကြောင်းအများကြီးဖော်ပြသည်။ Lab ကစမ်းသပ်အနီး-စုစုပေါင်းသင်တန်းသားများကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချထားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်၏ထိန်းချုပ်မှုသုတေသီများကိုဆက်ကပ်။ ဒါကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်ဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအပေါငျးတို့သကိုယ်ရေးရာဇဝင်တိတ်ဆိတ်တဲ့ setting ကိုဖတ်ကြသည်ကိုသေချာစေရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်; လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုထဲမှာ, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အချို့ကိုပင်ကိုဖတ်ပြီမဟုတ်ပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်း setting ကိုအတွက်သင်တန်းသားများကိုသူတို့လေ့လာဆည်းပူးလျက်ရှိကြောင်းသိသောကြောင့်နောက်ထပ်, သုတေသီများမကြာခဏသင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချနေကြသည်ရှင်းပြကူညီနိုငျသောအပိုဆောင်းဒေတာစုဆောင်းရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကမတူညီတဲ့ရှုထောင့်အပေါ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်သူများဟုမေး၏။ ဖြစ်စဉ်ကိုဒေတာ၏ဤကြင်နာသုတေသီများသင်တန်းသားများကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပြုမူဆက်ဆံပုံကွဲပြားခြားနားမှုနောက်ကွယ်မှယန္တရားများကိုနားလည်ကူညီနိုင်ဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကိုယ့်အားသာချက်အဖြစ်ဖော်ပြထားသောဤအတိအကျတူညီဝိသေသလက္ခဏာများလည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အားနည်းချက်များစဉ်းစားနေကြသည်။ လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်ပိုနှစ်သက်သူကိုသုတေသီများသူတို့လေ့လာဆည်းပူးလျက်ရှိကြောင်းသိသောကြောင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်အတွက်သင်တန်းသားများကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားပြုမူနိုင်ကြောင်းငြင်းခုန်။ ဥပမာ, ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက်သင်တန်းသားများကိုသုတေသန၏ရည်မှန်းချက်မှန်းဆခြင်းနှင့်ဘက်လိုက်ပေါ်လာဖို့မသကဲ့သို့မိမိတို့၏အပြုအမူပြောင်းလဲခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ထို့ပြင်လယ်ကွက်စမ်းသပ်ချက်ပိုနှစ်သက်သူကိုသုတေသီများကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုသာအလွန်စင်ကြယ်သောမြုံဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်နိုင်မငြင်းမယ်နှင့်အရှင်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်ကိုမှန်ကန်ငှားရမ်းဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်မိခင်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထင်ကြီးပါလိမ့်မယ်။ အဓိကအားဖြင့်ပညာတတ်အနောက်တိုင်းမှကျောင်းသားများ, စက်မှု, Rich နှင့်ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံများ: နောက်ဆုံးအနေနဲ့လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်အများအပြားအားပေးထောက်ခံသူတွေလိုက်တယ်သင်တန်းသားများပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက် '' မှီခိုဝေဖန် (Henrich, Heine, and Norenzayan 2010a) ။ ဆက်စပ်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဖြင့်စမ်းသပ်ချက် (2007) အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်း-Field စဉ်ဆက်ပေါ်နှစ်ခုအစွန်းသရုပျဖျော။ အဲဒီနှစျခုအစွန်းအကြားမှာတော့ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ခွဲခန်းသို့ Non-ကျောင်းသားများကိုဆောင်ခဲ့သို့မဟုတ်လယ်သို့သွားပေမယ့်နေဆဲပါဝင်သူတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောတာဝန်လုပ်ဆောင်ရှိခြင်းအဖြစ်ချဉ်းကပ်မှုအပါအဝင်စပ်ဒီဇိုင်းများအမျိုးမျိုးကိုလည်းရှိပါသည်။
Analog စ-ဒစ်ဂျစ်တယ်: အတိတ်တွင်တည်ရှိသောဓာတ်ခွဲခန်း-Field အတိုင်းအတာအပြင်, ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သုတေသီများသည်ယခုစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်ရာတစ်လျှောက်ဒုတိယမြောက်အဓိကရှုထောင်ရှိသည်ဆိုလိုသည်။ စင်ကြယ်သောဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်, စင်ကြယ်သောလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်များနှင့်အကြားမှာရှိတဲ့ hybrids တွေကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်သကဲ့သို့စင်ကြယ်သော Analog စစမ်းသပ်ချက်, စင်ကြယ်သောဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များနှင့် hybrids တွေကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီရှုထောင်၏တရားဝင်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကမ်းလှမ်းရန်လှည်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အသုံးဝင်သောအလုပ်လုပ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အဦများအသုံးပြုခြင်း, သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်း randomize, ကုသကယ်မနှုတ်, နှင့်ရလဒ်တိုင်းတာရန်လုပ်ကြောင်းစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့ (2012) ဤအဆင့်များအပေါငျးတို့သလေးများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေကိုအသုံးပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ barnstars နှင့်ဝီကီပီးဒီးယား၏လေ့လာမှုတစ်ခုအပြည့်အဝဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာအပြည့်အဝ Analog စစမ်းသပ်ချက်သည်ဤအဆင့်လေးဆင့်မဆိုဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အခြေခံအဆောက်အဦများ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ကြပါဘူး။ စိတ်ပညာအတွင်းရှိဂန္စမ်းသပ်ချက်အတော်များများဟာအပြည့်အဝ Analog စစမ်းသပ်ချက်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီနှစျခုအစွန်းအကြား၌, Analog စနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ရှိပါတယ်။
တချို့လူတွေကဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်စဉ်းစားတဲ့အခါ, သူတို့ကချက်ချင်းအွန်လိုင်းစမ်းသပ်ချက်၏ထင်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ကို run ဖို့အခွင့်အလမ်းများကိုအွန်လိုင်းရုံမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကံဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများကုသမှုသို့မဟုတ်အတိုင်းအတာရလဒ်များကယ်နှုတ်တော်မူနိုင်ရန်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြု. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက် run နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများရလဒ်များတိုင်းတာဖို့ built ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကုသမှုသို့မဟုတ်အာရုံခံကိရိယာကယ်နှုတ်တော်မူစမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းတွင်ဤအခနျးတှငျမြင်ရပါလိမ့်မည်အဖြစ်, သုတေသီများပြီးသား 8.5 သန်းအိမ်ထောင်စုပေါင်းပါဝင်သောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်ချက်များတွင်ရလဒ်များတိုင်းတာရန်အိမ်တွင်းပါဝါမီတာကိုသုံးခဲ့ကြ (Allcott 2015) ။ ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်သည့် built ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပေါင်းစည်းဖြစ်လာလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုနှင့်အာရုံခံကိရိယာများသို့ပေါင်းစည်းဖြစ်လာသကဲ့သို့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ကို run ဤအခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ရုံအွန်လိုင်းစမ်းသပ်ချက်မရှိကြပေ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်များဓာတ်ခွဲခန်း-Field စဉ်ဆက်တလျှောက်နေရာတိုင်းစမ်းသပ်ချက်အသစ်ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်တီးပါ။ စင်ကြယ်သောဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, သုတေသီများသင်တန်းသားများကို '' အပြုအမူများ၏အသေးစိတ်တိုင်းတာဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေကိုသုံးနိုင်သည်; တိုးတက်လာသောတိုင်းတာခြင်းဤအမျိုးအစားတွေထဲကဥပမာအားကြည့်တည်နေရာအတိအကျကိုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာမှုများကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းမျက်စိ-ခြေရာခံစက်ကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာလည်းအွန်လိုင်းဓာတ်ခွဲခန်းကဲ့သို့စမ်းသပ်ချက်အပြေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများလျှင်မြန်စွာအွန်လိုင်းစမ်းသပ်ချက် (ပုံ 4.2) အတွက်သင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့အမေဇုံစက်မှု Turk (MTurk) မွေးစားပါပြီ။ MTurk ငွေရှိသူများတာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ရန်ဆန္ဒရှိသူကို "အလုပျသမား" နဲ့ပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးတာဝန်များကိုရှိသည်သောသူ "အလုပ်ရှင်များ" တိုက်စစ်ပါတယ်။ ရိုးရာအလုပ်သမားစျေးကွက်နှင့်မတူဘဲ, သို့သော်, ပါဝင်တာဝန်များကိုများသောအားဖြင့်ဖြည့်စွက်ရန်သာမိနစ်အနည်းငယ်လိုအပ်နှင့်အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအကြားတစ်ခုလုံးကိုအပြန်အလှန်အွန်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့-ကသဘာဝကျကျစမ်းသပ်ချက်အချို့အမျိုးအစားများများအတွက်ကိုက်ညီသည်ကိုသူတို့မလုပ်ဆောင်မယ်လို့တာဝန်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့လူရိုးရာဓာတ်ခွဲခန်း-ပေးဆောင်စမ်းသပ်ချက်၏ MTurk တူတဲ့ရှုထောင့်လို့ပဲ။ အမှန်ကတော့, MTurk သင်တန်းသားများကို-စုဆောင်းရေးတစ်ရေကူးကန်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပေးဆောင်များအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများဖန်တီးထားပြီးလူတွေကို-နှင့်သုတေသီများပါဝင်သူတစ်ဦးကအမြဲတမ်းရရှိနိုင်ရေကူးကန်သို့အသာပုတ်ပါကြောင်းအခြေခံအဆောက်အဦများ၏အားသာချက်ယူကြပြီ။
ပုံ 4.2: စာတမ်းများအမေဇုံစက်မှု Turk (MTurk) မှဒေတာများသုံးပြီးထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ MTurk နှင့်အခြားအွန်လိုင်းလုပ်အားစျေးကွက်သုတေသနပညာရှင်များကစမ်းသပ်ချက်အဘို့အသင်တန်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့အဆင်ပြေလမ်းကိုဆက်ကပ်။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Bohannon (2016) ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေလယ်ပြင်ကဲ့သို့စမ်းသပ်ချက်အဘို့ ပို. ပင်ဖြစ်နိုင်ခြေဖန်တီးပါ။ အထူးသဖြင့်သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောပိုမိုကွဲပြားခြားနားသင်တန်းသားများနှင့်ပိုပြီးသဘာဝအဆက်တင်များဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဒေတာများပေါင်းစပ်မှသုတေသီများကို enable ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်လည်း Analog စစမ်းသပ်ချက်အတွက်ခက်ခဲမှတော်မှာသုံးခုအခွင့်အလမ်းများကိုဆက်ကပ်။
ပထမဦးစွာအများဆုံး Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုပါဝင်သူရာချီရှိသော်လည်း, ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်သင်တန်းသားများကိုသန်းပေါင်းများစွာရှိနိုင်ပါသည်။ တချို့ဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်သုည variable ကိုကုန်ကျစရိတ်မှာ data တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်စကေးအတွက်ဤပြောင်းလဲမှုသည်။ သုတေသီများသင်တန်းသားများ၏နံပါတ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်ပါဘူးတိုးမြှင့်တစ်ခုစမ်းသပ်အခြေခံအဆောက်အအုံဖန်တီးတစ်ချိန်ကဆိုလိုသတည်း။ 100 ကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတဲ့အချက်တစ်ချက်အားဖြင့်သင်တန်းသားများ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်ဖွင့်မယ့်အရေအတွက်အပြောင်းအလဲမျှမက, ကစမ်းသပ်ချက်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာ (ဥပမာ, ကုသမှုသက်ရောက်မှုများပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော) သင်ယူဖို့နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများ (ဥပမာကြီးမားသော-အုပ်စုတစ်စုစမ်းသပ်ချက်) ကို run ဖို့သုတေသီများဖွကြောင့်တစ်ဦးအရည်အသွေးအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချက်ငါဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်ဖန်တီးခြင်းအကြောင်းကိုအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်သောအခါငါအခန်း၏အဆုံးဆီသို့အဲဒါကိုပြန်လာပါလိမ့်မယ်, ဒါအရေးကြီးပါတယ်။
ဒုတိယအချက်မှာအများစု Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုချွတ်စွပ်အရွယ်အစား Widgets တွေအဖြစ်ပါဝင်သူပြုမူဆက်ဆံသော်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်မကြာခဏသုတေသန၏ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဆင့်သင်တန်းသားများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ သူတို့တိုင်းတာခြင်းစနစ်များကိုအစဉ်အမြဲ-on ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာ run ကြောင့် Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်သမုတ်သောဤသည်နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်, (အခန်း2ကိုကြည့်ပါ) ဒီဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များတွင်မကြာခဏရရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Facebook ကမှာသုတေသီတစ်ဦးကတက္ကသိုလ်သုတေသီသူမ၏ Analog စလယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုရှိလူအကြောင်းကိုရှိပါတယ်ထက်သူမ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှုရှိလူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုပြီး Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကို pre-ကုသမှုကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများ-ထိုကဲ့သို့သောပိတ်ဆို့ခြင်းအဖြစ်ဖွ (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) နှင့်သင်တန်းသားများ၏ပစ်မှတ်ထားစုဆောင်းမှု (Eckles, Kizilcec, and Bakshy 2016) ပိုပြီးအမြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုသက်ရောက်မှုများပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏ခန့်မှန်းချက်အဖြစ်ကတညျး (Athey and Imbens 2016a) နှင့်တိုးတက်သောတိကျဘို့ covariate ညှိနှိုင်းမှု (Bloniarz et al. 2016) ။
အများအပြား Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတော်လေးချုံ့ငွေပမာဏအတွက်ကုသမှုကိုအတိုင်းအရှည်ရလဒ်များကယ်နှုတ်သော်လည်းတတိယအချက်အချို့ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်ကျော်အများကြီးပိုရှည် timescales ဖြစ်ပျက်။ ဥပမာအားဖြင့်, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့စမ်းသပ်ချက်ရလဒ် 90 ရက်ကြာနေ့စဉ်တိုင်းတာခဲ့သည်ကို၎င်း, စမ်းသပ်ချက်တွေထဲကကျွန်မအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်အခနျးတှငျအသငျသညျကိုပြောပြလိမ့်မယ် (Ferraro, Miranda, and Price 2011) အခြေခံအားဖြင့်အနည်းဆုံးသုံးနှစ်ကျော်ရလဒ်များခြေရာခံခြင်းမရှိ ကုန်ကျစရိတ်။ ဤသုံးပါးအခွင့်အလမ်းများကို-အရွယ်အစား, Pre-ကုသမှုသတင်းအချက်အလက်နှင့်စမ်းသပ်ချက်တိုင်းတာခြင်းစနစ်များကိုအစဉ်အမြဲ-on ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာ run ကြသောအခါ longitudinal ကုသမှုနှင့်ရလဒ်ကိုအများဆုံးဒေတာ-ပေါ်ထွန်း (အမြဲ-on ကိုတိုင်းတာခြင်းစနစ်များကိုပိုမိုများအတွက်အခန်း2ကိုကြည့်ပါ) ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်အများအပြားဖြစ်နိုင်ခြေပူဇော်နေစဉ်, သူတို့လည်း Analog စဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့ Analog လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအချို့သောအားနည်းချက်များမျှဝေပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, စမ်းသပ်ချက်အတိတ်လေ့လာရန်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, သူတို့သာခြယ်လှယ်နိုင်ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ စမ်းသပ်ချက်မူဝါဒအလမ်းပြခြောအသုံးဝင်ပေမယ့်လည်း, သူတို့ပူဇော်နိုင်ပါတယ်အတိအကျလမ်းညွှန်မှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှီခိုသောရောဂါများ, လိုက်နာမှုပြဿနာများနှင့် equilibrium သက်ရောက်မှုများအတန်ငယ်န့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ် (Banerjee and Duflo 2009; Deaton 2010) ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်လည်းလယ်ပြင်စမ်းသပ်ချက်-တစ်ဦးကျွန်မဤအခန်းနှင့်အခန်း6ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပါကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများချီးမြှင့်။